Isa iyo itsva vhezheni yeLibreOffice 6.0 paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Iyo Gwaro Foundation yakazivisa kuvhurwa nyowani kweiyo Hofisi suite uye nayo ichipembererawo gore rechinomwe. Mune iyi vhezheni itsva yeLibreOffice kuvandudzwa kwakasiyana siyana nekugadziriswa kwakaitwa uye pamusoro pezvese mamwe mabasa matsva akawedzerwa.
Kune avo vasati vaziva LibreOffice, iri hofisi suite iyo ine akati wandei zvirongwa mukabhuku yayo Pakati pedu patinowana Munyori uyo anoitirwa kugadzirisa zvinyorwa uye kuvapfumisa, Calc ispredishiti software, yakafanana neMicrosoft Excel, Impress yakanangana nekubata mharidzo uye masiraidhi, Base chirongwa chinotibvumidza kugadzira uye manejimendi edhatabhesi.
LibreOffice iri multiplatform uye yakavhurwa sosi suite saka tinogona kuishandisa muLinux pamwe neWindows uye Mac OS.
Pakati pezvinhu zvitsva zveLibreOffice 6.0 yatinowana:
Kuvandudzwa kwakawedzerwa kuMunyori.
Maduramazwi emunhu akagadziridzwa.
Kuenderana neMicrosoft Office kwakagadziridzwa zvakare.
Tsigiro yeAbhiWord, QuarkExpress uye PejiMaker mafaera
Kugona kusevha zvinyorwa se ebook ebook mafaera
OpenPGP gwaro kusaina / encryption
LibreOffice ine yeInternet vhezheni, iyo yegore-yakavakirwa vhezheni yeiyo suite, mushandisi mifananidzo ikozvino yatsigirwa uye inoratidzwa mune zvakataurwa. Dialogs zvakawedzerwa uye zvakagadziridzwa, nepo girama kururamisa ikozvino kwave kuwanikwa mune Munyori, Calc, uye Impress. Mutongi anopindirana akatenderera akawedzerwa kuMunyori, uye Calc ikozvino inotsigira ekutanga magiraidhi ekugadzirisa.
MuCalc, mirairo mitsva yakawedzerwa kusarudza masero asina kudzivirirwa mumaspredishiti. Uchishandisa iyo File> Export dialog, iwe unogona ikozvino kutumira sarudzo yemaseru (kana boka rezvimiro) muJPG kana PNG. Chekupedzisira, iyo Links dialog yakarerutswa, nepo matatu matsva ODF 1.2-anoenderana mabasa akaitwa, kutsvaga uye kutsiva zvinyorwa uchishandisa byte nzvimbo.
Kana iwe uchifarira kuziva zvishoma zvishoma nezve shanduko uye kugadzirisa mukati meiyi vhezheni itsva, ndinokusiya Iyi link uko iwe kwaunogona kuverenga nezve ese iwo.
1 Maitiro ekuisa LibreOffice 6 paUbuntu uye zvigadzirwa?
1.1 Kuburikidza neSNAP
2 Maitiro ekuisa LibreOffice 6 pane Fedora uye zvigadzirwa?
3 Maitiro ekuisa LibreOffice 6 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Maitiro ekuisa LibreOffice 6 paUbuntu uye zvigadzirwa?
Kuti tigoisa iyi nyowani vhezheni yeLibreOffice mune yedu system isu tinofanirwa kutanga tabvisa iyo yapfuura vhezheni kana tiinayo, izvi kuitira kudzivirira matambudziko anotevera, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tiite zvinotevera:
Iye zvino isu tinongofanirwa kurodha pasi, unzip uye nekuisa vhezheni itsva nemirairo iyi:
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kuisirwa kuburikidza neapapakuru mapakeji, iwe unogona zvakare kuisa LibreOffice kuburikidza neiyo SNAP package, ndinofanira kuyeuka kuti isu tinofanirwa kumirira kuti iedze kuzviita izvozvi asi iyo vhezheni nyowani haisati yawanikwa, iyo yekumisikidza chete isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6 pane Fedora uye zvigadzirwa?
Panyaya yaFedora, SUSE, Gentoo kana kumwe kugovera kunotsigira RMP mapakeji, tinogona kurodha pasuru yavanotipa kubva kune yakasununguka LibreOffice peji uye enderera kuiisa Isu tinoita izvi nekuvhura terminal uye kumhanya:
Pakupedzisira isu tinongoburitsa faira rinoguma nekuisa na:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Panyaya yeArch nemaitiro ayo akatorwa, iyo vhezheni inowanikwa mukati meAUR repositori ichiri iyo bvunzo vhezheni saka mumazuva mashoma tinogona kuisa iyi vhezheni vhezheni pane yedu system, ndinokusiira iwo rairo yekuisirwa.
Pasina imwezve ado, zvinongosara kuti iwe unakirwe newiyi vhezheni. Kune rimwe divi, kana iwe uchiziva nezve chero imwe nzira kune libreoffice, usazeze kuigovana nesu mubhokisi remashoko
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Isa iyo itsva vhezheni yeLibreOffice 6.0 paLinux
Alexander Urrutia akadaro
Chokwadi, ini zvakadaro handikwanise kuisa iyo nyowani vhezheni, chete kuyedzwa ndiko
Pindura kuna Alejandro Urrutia
Iko kune 32-bit vhezheni?
Pamwe ndosaka ndichiwana kukanganisa, mushure mekubvisa yangu yekare vhezheni:
2018-02-01 16:31:32 (821 B / s) - "LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz" yakachengetedzwa 
claudio @ claudio-EXO: ~ $ tar -xzvf LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
gzip: stdin: kwete mune gzip fomati
tar: Mwana akadzosa chinzvimbo 1
tar: Kukanganisa hakuwanikwe: kubuda izvozvi
Iwe une chokwadi here kuti OS yako iri 32-bit? ita $ uname -a mune terminal ... kana iri makumi matatu nemaviri zvobva zvati "i32" kana chimwe chinhu chakadai .. zvakare zvinoita sekunge iko kukanganisa kuri mufaira decompressor
Ndakaedza kuteedzera nhanho dziri muchinyorwa asi ndakaona kuti pane kukanganisa munzira yawakaisa kuisa paUbuntu uye zvigadzirwa paunenge uchiedza kuisa pane makumi matanhatu-bit michina.
Iko kwazvinotaura: wget http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/6.0.0/deb/x86/LibreOffice_6.0.0_Linux_x86_deb.tar.gz
Inofanira kuti: wget http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/6.0.0/deb/x86_64/LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
Uye, mushure mekuburitsa zip, iyo nzira yainofanira kunongedzera haisi "cd LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_deb", chinhu chaicho ndechekuti: cd LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_deb / DEBS
Muchidimbu, heano matanho:
cd LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_deb / DEBS
Iyi ndiyo mareferensi angu: http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/6.0.0/deb/x86_64/
Ikoko iwe unogona zvakare kuwana mapakeji ekuisa Libreoffice muSpanish.
Michael O. akadaro
Ndinoisa sei Libreoffice 6 muMageya?
Iwe unogona here kutsanangura kuiswa zvakadzama zvingave zvinonakidza nekuti ini ndiri mutsva kune iyo nyika yeLinux.
Pindura kuna Michael O.
Mhoroi munhu wese. Emanuel, ndinokubvunza mubvunzo, kana ndikatevera nhanho dzako dzekuisa LibreOffice kubva kuchiteshi, zvese zvanaka, kudzamara pandinonyora yekupedzisira rairo sudo dpkg -i * .deb iyo koni, inondiudza kuti yakakura kwazvo uye kuti ndinofanira kusefa. ndingaite sei? Ini ndiri mutsva kuLinux uye ndiri kushandisa LXLE. Ndatenda
Uri kushandisa chero zvigadzirwa zveDebian, senge Ubuntu? Ini handizive kuti nei iwe uine izvo izvo zvakanyanyisa uye iwe unofanirwa kuzvisefa, unogona here kugovera skrini kuti uwane mhinduro? Handina kumbobvira ndakanganisa izvozvo.
Zvichakadaro, ini ndinokuudza kuti LibreOffice 6 yatovepo kuisa kuburikidza nepa ppa (Ubuntu uye zvigadzirwa):
uye zvinotevera kusarudza:
a) Kana iri kekutanga iwe kuisa iyo:
sudo apt-tora kuisa libreoffice
b) Kana iwe uchitova neLibreOffice yakaiswa, unozvivandudza ne:
Nenzira, ini ndatoona kuti iyo distro yauri kushandisa ndeye LXLE. Ndakavhiringidzika neLXDE, hahaha.
Ivo vanofanirwa kugadzirisa ruzivo, kune vashandisi vevadzidzi seni zvinondivhiringidza. Nhasi zviri nyore kudzima yapfuura libreoffice uye kuisazve uchishandisa PPA
(chete yeUbuntu uye zvigadzirwa)
nhanho 1: (Kana iwe uine vhezheni yapfuura) Delete:
sudo apt-tora bvisa -purge libreoffice *
nhanho 2: wobva waisa
Kana iwe usina kunge waiswa, ingoita nhanho yechipiri :)
Ndinoonga rubatsiro rwechinyorwa. Zvese zvakandishandira. Kwaziso